Suko Ptfe Namatira Extruder Kurovedzwa - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE inowanzozivikanwa se teflon, epurasitiki mambo. PTFE namatidza extruder, iwo muchina unonyanya kugadzirwa neptfe machubhu. Iyo chubhu inowanzozivikanwa se capillary, sleeve kana hosipaipi.Equipment mutsetse kubva pakutanga kweiyo mbishi zvinhu kune iyo sieve hupfu, kusanganisa, kuchembera, billet, extrusion, ichitenderera, kutonhora, kucheka iyi yakazara maitiro, kuburitsa dzakasiyana hosipaipi zvigadzirwa kusangana nezvinodiwa. Chinyorwa chekushandisa, kutaurwa, zvinoshandiswa, zvinoshandiswa mushandisi uye zvimwe zvinhu zvinoenderana, parizvino, zvinogona kugadzira uye kuburitsa maratidziro akasiyana eiyo PTFE yekunamatira extruder muchina. Iyo teflon hosi iyo yainoburitsa inogona kushandiswa zvakanyanya muindasitiri yemauto, kemikari indasitiri, kurapwa, Aerospace, michina michina, kupisa kupisa uye mimwe minda.
Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi zvezvirongwa zvakasiyana, pane akangwara otomatiki uye akapusa. Rudzi rwakareruka rwakagadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemamwe makambani ega, anonyanya kushandiswa kuyedza, kugadzirisa kugadzirisa mashandiro ekudzora, mutengo wemidziyo wakaderera, inokodzera kugadzirwa kwe batch diki. Akangwara otomatiki kutonga ne PLC, yekubata skrini yekumisikidza, otomatiki kugadzirisa kweiyo extrusion kumhanya, tembiricha kudzora, extrusion chubhu mhando kutonga.
SUKO PTFE MACHINE TECH CO., LTD nyanzvi mukusimudzira, kugadzira uye kutengesa kweiyo fluoroplastic michina, iine makore ekuziva mumunda we tetrafluoride michina, yedu michina yakashandira musika wepasi rose mune dzinosvika makumi mana nyika nematunhu. Vatengi vedu vanobatanidzwa muindasitiri yezvokurapa, yeindasitiri yezvigadzirwa zvemuchadenga, indasitiri yemauto, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemotokari uye dzakasiyana michini, pombi uye zvikamu zvematanda maindasitiri.Iyo yave ichizivikanwa zvakanyanya nevepasi rese fluoroplastic indasitiri.
Corporate Value: Kugadzira, tekinoroji, kugona uye ungwaru.
Mission: kugadzira iyo yekutanga mhando yemhando yetetrafluoride michina.
1. ZVIRATIDZO PTFE PASTE EXTRUDER
Namatira extrusion yeakasiyana marondedzero ezvinhu akaparadzirwa zvinhu tetrafluoride chubhu;
Vertical kumisikidza extrude, inogona kuburitsa 2-15 metres paminiti;
Kureba kwekuwedzera kunogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa;
Akangwara kudzora zvishandiso, kugadzikana kushanda;
Kugadziriswa kuri nyore, kutapurirana kuri kushanduka, chimiro chiri nyore kuisa;
SUKO inopa yakazara seti yemidziyo, inodiwa ebetsero michina uye technical solution;
SUKO inopa mashandiro enzira yehungwaru;
Multi-rukoko zvinhu chubhu zvinogona extruded;
Maturiro matatu anodiwa kuisa michina, shanda pahuriri hwechitatu, chengetedza nzvimbo yekushandisa yakachena, usarega chero guruva mukati. Kugadzirira-gadziriso kamuri yekugadzirira, inoshandiswa kusanganisa mbishi zvinhu uye zvinowedzerwa, kurapa iyo mbishi zvinhu. iyo sintering oven, chisanganisi uye yemagetsi sieve.A hydraulic chiteshi inoiswa padenga repiri senzvimbo yekuchengetedza.First floor pombi extrusion, ichitenderera yakapedzisa chigadzirwa.
Kune machubhu mahombe ane dhayamita yekunze inopfuura 50mm, inoda kusvinwa kubva kumusoro kuzasi, danho rekushanda iri rinokwana mita 8-10 kusvika kumusoro zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi;
Kune machubhu ane dhayamita yekunze isingasviki 40mm, iyo urefu hwese ingangoita 13-15 metres;
Tinogona kugadzirisa michina zvinoenderana neicho chaihwo pasi saizi yemutengi.
Zvinoenderana nehunhu hwechigadzirwa, kuitira kuti uve nechokwadi chehunhu hweiyo extruded tetrafluoride chubhu, parizvino iyo yepasirese yakatwasuka extrusion, hapana yakatwasuka extrusion.
Pasi pemamiriro ezvinhu akajairwa, sikweya mutoro unotakura unofanirwa kuve unobva pamakirogiramu mazana mashanu kusvika pairi toni, uye huremu hwese hwemidziyo ingangoita matani maviri.
Iyo isina chinhu kugadzira muchina inovhara nharaunda inenge 1 mativi emamirimita, uye iyo extruder inovhara nzvimbo inosvika 1.5 mativi emamirimita.
Maindasitiri emagetsi standard: 380V, 50Hz, 3P, iyo voltage inogona kuve inoenderana maererano nezvinodiwa nemushandisi.
Iyo yakapusa michina inoda kuve yakagadzirirwa neyakaomeswa mweya.
3. Midziyo GENERAL PARAMETER
Main technical Magadzirirwo
Aihwa. Zvinhu Unyanzvi Maitiro
Extruder PTFE chubhu renji:
1 Kunze kwepakati 0.5mm - 70mm
2 Wall ukobvu renji 0.1mm - 3mm
Main Extruder michina
1 Simba 3 KW-10 KW
2 Cylinder Dhayamita 20mm-300mm
3 kureba mhango urefu 400mm - 2000mm
4 Extruder Rudzi Vertical Yakadzika kana Yakakwira mhando
5 Dhinda mhando Hydraulic
1 Simba 1KW -10KW
3 Blank kumusoro 400mm - 2000mm
4 Dhinda mhando Hydraulic
5 Extruder Rudzi Vertical kumusoro
1 Simba 2-10 kw
2 Sintering nzvimbo 3
3 Kumusoro 8000-9000mm
4 Kupisa 500 dhigirii
1 Dare rekutonga Bata skrini chirongwa chekutonga system
Ongorora: Namatira Extruder yakagadzirirwa neakasiyana extruder mutsetse zvinoenderana chaizvo chubhu saizi renji.
4. Midziyo yekuisa Instructions
5. ZVINODZIDZISWA ZVEKUSHANDISA
Tarisa kuti simba-pane voltage uye simba remidziyo zvinoenderana here, uye tambo yekubatana inoenderana nemudhirowa wiring.
Tarisa hydraulic mafuta chinzvimbo, tarisa iyo hydraulic pombi kubatana kwakarurama. Simbisa yakamanikidzwa mweya kubatana
Wotarisa kana chakuvhuvhu yakaiswa nemazvo uye kusimbisa Chinyorwa oparesheni uye debugging
Simba pamusoro, kuburikidza nePLC system yekumisikidza kumanikidza, tembiricha yenzvimbo yega yega tembiricha, yakabata nguva, yekumhanyisa extrusion uye mamwe ma parameter
Isa iyo yakagadzirirwa teflon billet mune iyo extruder
Mira mira utange muchina
Rongedza kana cheka iyo yakadzoserwa tetrafluoride chubhu murefu raunoda.
Mushure mekushandisa, dzima muchina uye suka furu.
6. Midziyo nekugadzira Mold
Nguva dzose tarisa kukwirira, hutsanana uye tembiricha yemafuta emagetsi
Inokurudzirwa kutsiva iwo hydraulic mafuta mwedzi mitanhatu yega yega
Dzorera zvisimbiso kana zvakasakara
Iyo Foroma inofanirwa kucheneswa nekuchengetedzwa nenguva, uye pamusoro panofanira kuvezwa nechetete hwemafuta ekudzivirira
Bata inopisa tembiricha tembiricha Switch zvinyoronyoro uye chengeta zvakanaka
7. KUTSANANGURWA KWENYAYA DZESVONDO NEZVEZVINHU
Izvo zvinodiwa zvikamu zvemidziyo zvinotumirwa kumutengi pamwe nemidziyo
Chinyorwa chezvikamu zvikuru zvemidziyo chinotumirwa kumushandisi pamwe nemidziyo
Kana vatengi vatenga zvishandiso zvedu, Pamusoro pezvinhu zvinodiwa, isu tinopa zvakafanira zvikamu zvevashandisi kutsiva, kusevenza kumisikidza, zvikamu zvekugadzirisa zvikamu zvakajairika uye zvinogona kutengwa mumusika wemuno
Nekuda kwehunyanzvi hwekushandisa, iwe unogona kuenda kufekitori kuti unodzidza kuisirwa, kugadzirisa dambudziko, kushanda, shanduko yekuchinja, kugadzirisa uye kutungamira kweiyo michina yemahara usati waendesa.
Kana chinhambwe, vashandi, nguva uye zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvikakanganisa, hatigone kuuya kukambani yedu kuti tidzidze, tinogona mune rimwe bato takabvumirana kuronga mainjiniya kuti vauye kuzotungamira iyo yekuisa michina, kugadzirisa dambudziko, kushanda, shanduko yeforoma, kugadzirisa, gadzira nhungamiro
Tinogona zvakare kupa nhungamiro iri kure, uye vashandisi vanogona kusarudza dzimwe nzira senge runhare, vhidhiyo, tsamba kuti vadzidze kumisikidza zvekushandisa, kugadzirisa dambudziko, mashandiro, shanduko yekuchinja, kugadzirisa, gwara rekutungamira, nezvimwe.
9. PAMUSORO PASHURE-SALES SERVICE
Iyo garandi nguva yezvikamu zvese uye main muchina igore rimwe kubva pazuva rekutengesa
Kana paine chero dambudziko, bata vashandi vevashandi kuti utsanangure dambudziko iri munguva. Vashandi vedu vevashandi vachatevera uye vagadzirise dambudziko mukati maawa makumi maviri nemana.
Kana mutengi aine wekuparadzira wekambani yedu, isu tinoshandira pamwe nevatengesi vemuno kugadzirisa dambudziko.
Kana zvinodiwa nevatengi zvikurumidza, kambani yedu ichapa vhidhiyo technical technical munguva
PASHURE-SALES SERVICE TEL: + 86-0519-83999079 / +8619975113419
10. ZVIMWE RELATED ZVESANGANO DZOKUDZIDZA
1 Sese yemagetsi Kusunungura poda usati wasanganisa
2 Chisanganiso Kusanganisa poda neLiquid lubricant
3 Kuchenesa Ovhheni Kusvina upfu nemafuta emvura
4 Destaticizer Kubvisa electrostatic kubva pombi mushure mekudonha usati wanyura
5 Muchina unotenderera Otomatiki wring chubhu
6 Corrugated Muchina Kugadzira chubhu OD OD 8-50mm
7 Kune imwe tetrafluoride michina, ndapota nyorera kambani yedu kuti ubvunze